ELECTRONIC ARTS CTO KEN MOSS KWURU BANYERE OKIKE NKE PROJECT ATLAS íGWé OJII VIDEO EGWUREGWU IKPO OKWU - AKỤKỌ - 2019
A na - akpọ nkà na ụzụ si EA Project Atlas.
Nkwupụta kwekọrọ na kọntaktị nke Electronic Arts mere nduzi na-ahụ maka ụlọ ọrụ Ken Moss.
Project Atlas bụ usoro ígwé ojii maka ndị egwuregwu abụọ na ndị mmepe. Site n'echiche onye gamer, enwere ike inwe ihe ọhụụ ọ bụla pụrụ iche: onye ọrụ na-enweta ngwa ahịa ma malite egwuregwu na ya, nke a na-edozi na sava EA.
Ma ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịga n'ihu na mmepe nke teknụzụ igwe ojii ma nye ya ọrụ maka egwuregwu na-eto eto na Frostbite engine dị ka akụkụ nke ọrụ a. Na nkenke, Moss na-akọwa Project Atlas maka ndị mmepe dịka "ọrụ engine".
N'okwu a, ọ bụghị nanị iji ngwa nke kọmputa ndị dịpụrụ adịpụ na-eme ka okwu ahụ kwụsị. Atlas Atlas ga-enyekwa ohere iji usoro netwọk na-emepụta ihe dị iche iche (dịka ọmụmaatụ, ịmepụta odida ala) na nyochaa omume nke ndị egwuregwu, ma mee ka ọ dịrị mfe itinye ọnụ na-eme ka ndị mmadụ nwee egwuregwu.
Ugbu a, ihe karịrị otu puku mmadụ EA ndị ọrụ si dị iche iche studios na-arụ ọrụ na Project Atlas. Onye nnọchiteanya nke Eletronic Arts ekwughị atụmatụ ọ bụla maka ọdịnihu maka nkà na ụzụ a.